KULMIYE Party » Generaal Doolaal oo soo Bandhigay Sheeko Xiiso Badan oo ku Saabsan Madaxweynaha Cusub ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi Generaal Doolaal oo soo Bandhigay Sheeko Xiiso Badan oo ku Saabsan Madaxweynaha Cusub ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi – KULMIYE Party
Generaal Doolaal oo soo Bandhigay Sheeko Xiiso Badan oo ku Saabsan Madaxweynaha Cusub ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi
HomeGeneraal Doolaal oo soo Bandhigay Sheeko Xiiso Badan oo ku Saabsan Madaxweynaha Cusub ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi
Muuse waxaan ku idhi marka aad Maraykanka ka soo noqoto wax hel iyo wax waaba gurigayga imo (ku soo deg), intii aannu bixin waxaanan kala dardaarmay xaaskayga anigoo xaaladdana uga warramay, waxaan ku idhi ‘qolka hurdada ku qari oo yaanay cidna arkin xaaskiisa mooyee, anna xafiiskaygii iyo wasaaraddiiba kuma noqon oo meelo kale oo aan xukumo ayaan kormeer u aaday. Muuse gurigeygii ma iman ee meel kale ayuu ku dhuuntay, waanu is waynay Muuse!! Markii ay 8:30 Fiidnimo tahay ayuu Muuse gurigeygii yimid wuxuuna xaaskeyga u sheegay inay wax walba u dhamaadeen oo u madaarka u socdo hadda caawa ku qoranyahay duulimaadka.
Anigoo jooga Rugta Saraakiisha (Officers club) ayey xaasku telefoon ii soo dirtay, gurigii ayaan degdeg ku imid, waxayna ii sheegtay farriinti Muuse, toos ayaan madaarka (airport) u imid waxaanan ka soo galay qaybti VIP, waxaanan u gudbay qaybta socdaalka (Immigration), mise waa Muuse oo agtayda taagan oo askarti Hangashta ee ciidanka shandada la wadaan sidii sarkaal dhoof caadi ah u socda!!! Waar Muuse miyaanay kuu dhammaan? Sarkaalkii socdaalka (Immigration) ayaa yidhi taliye maxaan qabanaa? Aniguna waxaan idhi maxaad sarkaalka kuyuuga ugu heysaan, soo dhaaf soo dhaaf, durba shaabbadii bixidda (Exit) ugu dhufay, kooxdii hangashtu markay i arkeen ayey shandadiisii la soo carareen oo hoolkii u soo gudub!!! Runtii isaga deganaansho ayaa ka muuqday laakiin anigu culays ayaan dareemaayey, 10:30 Fiidnimo ayuu rakaabkii diyaaradii fuulay Muuse-na kuwii ugu horreeyay ee diyaaradda fuula ayuu ahaa. Bannaanka hore ayaan Mareeyaha Garoonka Cabdillaahi Farmaajo isla taagay isagoo ii sheekeynaaya laakiin aan kicitaanka diyaaradda raagsanaayo, 11:00 habeenimo oo daqiiqado dhiman ayey kacday. Alxamdulillaah Alxamdulillaah!!!! Anigoo Ilaahay baryaya, laakiin dareemaya inaan dembi xaq ah galay oo aad u faraxsan ayaan soo noqday!!! Foosiya waa xaaskayge daaradda ayey taagantahay, anoon Baabuurkii ka soo degin ayey igu boobtay ‘ma dhoofay ma dhoofay’, haa markaan idhi ayey ooyday oo aan aamusiin kariwaayay!!! marna farxad ayey la ooyeysay marna dembigiisa oo ay garanla’adahay laakiin reereysan!!!